Filohan'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo
I Joseph Kabila, izay teraka tamin' ny 4 Jona 1971 tao Hewa Bora II ao amin' ny faritanin' i Sud-Kivu, dia mpitondra fanjakana kinô-kôngôley. Filohan' ny Repoblika Demôkratikan' i Kôngô izy tamin' ny 17 Janoary hatramin' ny 25 Janoary 2019 ary senatera mandra-pahafatiny nanomboka tamin' ny 15 Marsa 2019.
I Joseph Kabila
Zabak' i Laurent-Désiré Kabila izy ary nandimby an-drainy izay nisy namono izy tamin' ny 16 Janoary 2001, nandritra ny ady faharoa tany Kôngô. I Joseph Kabila no filoham-panjakana zandriny indrindra tao amin' io firenana io. Nitarika ny Alliance pour la majorité présidentielle (AMP) izy ary namorona ny Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) tamin' ny taona 2002. Tafajanona teo amin' ny fitondrana izy taorian' ny Accord global et inclusif de Pretoria izay namarana ny ady tamin' ny taona 2003.
Tamin' ny taona 2006 dia voafidy tamin' ny fihodinana faharoa tamin' ny fifidianana filoham-pirenena izy. Voafidy indray izy tamin' ny tapna 2011 nefa i Étienne Tshisekedi, mpifanandrina aminy, dia nanohitra an' izany voka-pifidianana izany. Tamin' ny taona 2016, rehefa tsy afaka nirotsaka ho fidina fanintelony izy, dia nanomotra amin' ny fotoana tsy voafaritra ny fifidianana filoham-pirenena izay tokony hatao, ka niteraka fahasahranana ara-pôlitika ho an' ny firenena izany.
Nandimby azy i Félix Tshisekedi tamin' ny taona 2019, ka izany no fifandimbiasana milamina teo amin' ny tantaran' io firenena io. Ny fomba nanatanterahana izany fifandimbiasana izany anefa niteraka fifandirana noho ny fiahiahiana ny amin' ny hosoka teo amin' ny fifidianana filoham-pirenena tamin' ny taona 2018. Nahiahina ho te hanohy ny fitantanana ny firenena any ambadimbadika any i Kabila, filoha teo aloha. Hatramin' izay dia lasa senatera mandra-pahafatiny izy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_Kabila&oldid=1040525"
Dernière modification le 1 Desambra 2021, à 09:28
Voaova farany tamin'ny 1 Desambra 2021 amin'ny 09:28 ity pejy ity.